နယ်စပ်တွင် ခိုလှုံဒုက္ခသည်များကို အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခဲ့ခြင်းအတွက် အမေရိကန်ကို မက္ကဆီကို ပြ?? - Yangon Media Group
နယ်စပ်တွင် ခိုလှုံဒုက္ခသည်များကို အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခဲ့ခြင်းအတွက် အမေရိကန်ကို မက္ကဆီကို ပြ??
မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ ဇန်နဝါရီ ၄
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် မက္ကဆီကိုနယ်စပ် ဆန်ဒီယာဂိုမြို့၌ တရားမဝင် စုရုံးရောက်ရှိကာ၊ အ မေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင် ရောက်ခွင့်ရရှိရေးကြိုးစားနေသူ ခိုလှုံဒုက္ခသည်များအား ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်က နယ်ခြားစောင့်တပ်များက မျက်ရည်ယိုဗုံးများသုံးကာ လူစုခွဲခြင်းအတွက် ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်သည်ဟု ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် သတင်းများအရ သိရှိရသည်။ ယင်းသို့ အကြမ်းဖက်လူစု ခွဲခြင်းအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန်လည်း မက္ကဆီကိုနိုင်ငံခြားရေးရုံးက မက္ကဆီကိုစီးတီးရှိ အမေရိကန်သံရုံးသို့ စာရေးသားပေးပို့ကာ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သူများကိစ္စအား အ မေရိကန်အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုပြီး ယခုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက် လူစုခွဲခြင်းလုပ်ရပ်အားကန့်ကွက် ကြောင်းလည်း စာထဲ၌ထည့်သွင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဒုက္ခသည်များသည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် ညပိုင်းက နယ်စပ်ဖြတ် ကျော်ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြစဉ် အမေရိကန်နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့များကမျက်ရည်ယိုဗုံးများသုံးကာ အကြမ်းဖက်လူစုခွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များသည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်က ယခုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်ပြုမူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုဒုတိယအကြိမ် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း သတင်းများအရသိရှိရသည်။ ဗဟိုအမေရိကနိုင်ငံများမှ ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားများစွာတို့ သည် မိမိတို့နိုင်ငံများအားစွန့်ခွာကာ မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှတစ်ဆင့် အမေရိကန်ပြည်မကြီးအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခိုလှုံရန် ကြိုးစားနေကြ ခြင်းဖြစ်သည်။
အငြင်းပွားနေသည့် ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းအတွင်းသို့ တတိယမြောက် အမျိုးသမီး ဝင်ရောက်
ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးများ စိတ်ကျရောဂါ ခံစားရမှုနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ အသုံးပြုမှု ဆက်စပ်နေ
ဈေးချိုတော် အပါအဝင် မန္တလေးမြို့ ဈေးများတွင် မြို့တော်စည်ပင်၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဈေးအကျိုး
မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောထွက် ပစ္စည်း ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရေးပြပွဲကို သုံးရက်ကြာ ကျင်းပမည်
ဘာစီလိုနာကွင်းလယ်လူ ဒင်းနစ်ဆွာရက်ဇ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ရန် အာဆင်နယ်နီးစပ်နေ၊ ဇန်နဝါရီဈေးကွက်အ
ရေခဲတောင်သို့ သွားရောက်ရိုက်ကူးမည့် ‘ဒို့ပိုင်တဲ့မြေ’ အပါအဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးကား မိတ်ဆ?